२३ वर्षीय मोडल निशा घिमिरेको द’र्दनाक अवस्था ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 11, 2021 AdminLeaveaComment on २३ वर्षीय मोडल निशा घिमिरेको द’र्दनाक अवस्था ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
तिन दर्जन बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी मोडल निशा घिमिरे यतिबेला आफ्नो स्वास्थ्यसंग सं’घर्षरत छिन । दुर्घ’टनामा परेर विगत तीन वर्ष देखि मृ’त्युशैयामा छटपटाइरहेकी मोडल निशा घिमिरेको भर्खरै उद्धार गरिएको छ । उनलाई नर्भिक अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले उद्दार गरेकी हुन् ।
उनि अभिनय नै अध्ययन गर्न भारत गएको बेला सडक दुर्घ’टनामा परेर गम्भीर घा’इते भएकी थिइन । भारतको देहरादुनमा दुर्घ’टना भएपछी उनलाई उपचार गर्न आर्थिक अवस्था क’म्जोर भएपछि बुबाले नेपाल ल्याएका थिए । नेपाल ल्याएपछि काठमाडौँको ट्रमा सेन्टर लगायत विभिन्न अस्पतालमा उनको उपचार भएको थियो ।
तर उनको स्वास्थ्यमा खासै सुधार आएको थिएन । यसै बीच कोरोना महामारी बढेपछी घिमिरे घर मै थन्किन पुगेकी थिइन । सामान्य मजदुरी गर्ने उनको आमा बुबाले राम्रो अस्पतालमा स्तरीय उपचार कुरै भएन । त्यसैले उनी नाजुक अवस्थामा घरमै थलिएर बसेको बेला चौधरीले उद्दार गरेकी हुन् । निशा घिमिरेको दुर्घ’टना अघि ६० किलो तौल थियो तर अहिले उनि पत्याउने नसकिने २० किलो तौलमा झरेकी छिन ।
हाल उनको नर्भिक अस्पतालमा राखेर उपचार थालिएको छ । प्रारम्भिक जाँचको क्रममा उनमा नशाको स’मस्या देखिएको छ । शरीरका महत्वपूर्ण अंगहरु जस्तै, मुटु, मृगौला, कलेजो, फोक्सो लगायतमा ठूलो स’मस्या देखिएको छैन । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोसः
आज नेपालमा थप ३,७५० जनामा कोरोना सं’क्रमण भएको पुष्टि ! ५,२२५ जना संक्रमणमुक्त….
भोलीको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ २९ गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ जुन १२ तारिख
६ दिनमा ५ करोडले हेरेको ललितपुरको भाइरल डरलाग्दो अचम्मको हल्लिने ठाउ, ज्यान जोखिममा राखेर यस्तो गर्छन् ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आज नेपालमा थप ४५२४ जनामा कोरोना सं’क्रमण पुष्टि, १८ जनाको मृ’त्यु,सक्रिय सं’क्रमित २६ हजार नाघे